Otu esi etolite mọstad Microgreens ọsọsọ ma dịkwa mfe - Microgreens
Otu esi etolite mọstad Microgreens ọsọsọ ma dịkwa mfe
Mọstad Microgreens Ndenye Ama
Mọstad Microgreens na-eto eto
Ọ bụrụ na ị na-erubere karama mọstad mgbe niile na kọmpụta, ị ga-ahụ mọstad microgreens n'anya. Babymụaka ndị a na-acha akwụkwọ ndụ adịghị ka ihe na-ewu ewu, ma ha na-etinye otu ihe ahụ na-ekpo ọkụ ma na-atọ ụtọ. N'ezie, mkpụrụ osisi mọstad na-epulite bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka ahịhịa ndị na-atọ ụtọ. Ha bụ ezigbo ogige-enyi na enyi mgbakwunye na zest elu nri abalị!
Mkpụrụ osisi mọstad tozuru etozu nwere ike inye anyị agba odo ahụ maara nke ọma, mana ha enweghị ike ịsọ mpi na nri na ịdị mfe nke mọstad microgreens. Ije ozi nke mọstad microgreens dị ka (ma ọ bụ karịa ka mma) karịa akwụkwọ nri gị. Ndi ahihia ndia nwere vitamin A, B6, C, K, E, calcium, fiber, potassium na ndi ozo. E kwuwerị, mọstad bụ akụkụ nke ụdị Brassica, nke bụ ụfọdụ n'ime mkpụrụ osisi kacha nwee ahụ ike.
Mọstad microgreens yiri nnọọ gbawara n'etiti microgreens . Ha nwere ocha ocha na icha mmirimmiri cotyledons nwere obere crunch. Otú ọ dị, ị nwere ike ime ka ogige microgreen gị pụta ìhè site na iji ụdị mọstad dị iche iche. Red Garnet dịgasị iche iche, dịka ọmụmaatụ, nwere epupụta mara mma burgundy. E nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ebe ahụ, yabụ micro garden gị nwere ike ịdị ka oseose ka ọ na-atọ ụtọ!
Ezi Ngwaahịa Maka Mọstad Microgreens:
Espoma Mkpụrụ Starter Mix
Kitchen ịkwa osisi
Na-eto eto Trays
Mkpụrụ osisi mọstad na-ekpo ọkụ
Flavour: Ọkụ, oseose, mọstad
Itucha / igbapu: Mba
Mgbapu: Daysbọchị 2-3
Ezigbo Owuwe Ihe Ubi: 5-14 ụbọchị
Mọstad na-epulite bụ otu n'ime ihe kachasị mfe iji mepụta - ma microgreens na-eto eto bụ ọrụ dị mfe! Ka anyị bido ịchịkọta ihe ndị ahụ Achọrọ maka nri nri micro a dị mfe na-eto eto.
ka diatomaceous uwa na-egbu ahihia skwọsh
Red Garnet mọstad microgreens
Mkpụrụ: họrọ ụfọdụ mkpụrụ osisi mọstad dị elu. Anyị na-enwe mmasị na ndị nke sitere na Ahịa Ahịa Ezi.
Container: dịkarịa ala abụọ emighị emi trays, onye na drainage oghere na otu na-enweghị (i nwere ike inwe a set nke ndia ma tie oghere ahụ n'onwe gị)
Na-eto eto na-eto eto: Espoma mkpụrụ Starter mix bụ nhọrọ mbụ anyị mgbe anyị na-eto microgreens
Ìhè: chọọ àgwà na-eto eto, dị ka Nke a (anyị na-akwado ndị a T5 eto ọkụ )
Nkọ mkpa: kichin ịkwa osisi dị mma maka microgreens (ị nwekwara ike iji ha maka ahịhịa ndị ọzọ!)
Dịka e kwuru n'elu, anyị hụrụ mkpụrụ osisi microgreens n'anya Ezi Ahia Ahia , na mọstad microgreen mkpụrụ ha abụghịkwa ụdị iwu a. Nke a bụ nhọrọ nke ọkacha mmasị anyị:
Mizuna Red Streaks Mọstad - dị ma ọ bụ mkpụrụ
Mkpụrụ osisi Oriental - dị ma ọ bụ mkpụrụ
Wasabi Mọstad - dị na ma ọ bụ mkpụrụ
Mkpụrụ Mọstad pere mpe ka ị wee chọọ ezigbo ego iji kụọ ha nke ukwuu. Iji nọrọ n'akụkụ nchebe, anyị na-akwado ịzụta ounce nke mkpụrụ kwa 10 × 20 na-eto eto. Nwere ike ịnwale ịgha mkpụrụ mọstad site na ụlọ ahịa, ma mkpụrụ ndị a chọrọ maka ịkọ ugbo microgreens nwere ike ịga nke ọma.
Microgreens chọrọ usoro ọka na-eto eto mara mma, ọ bụ ya mere anyị ji atụ aro ala ịmalite mkpụrụ. Usoro mgbọrọgwụ siri ike nke mọstad na-epulite ga-adị mfe ịnyagharị na ya, ma ọ bụghị ala jupụtara na unyi. Abịa na Mọstad, can nwekwara ike too microgreens ke aki oyibo ma ọ bụ hydroponically .
Dị ka ọ dị na ahịhịa micro niile, mọstad na-epupụta ga-aga nke ọma n'okpuru ọkụ kama ìhè anyanwụ. Ebe ọ bụ na ìhè nwere ike eyịride kpọmkwem n'elu tree, ndị na-epulite seedlings ga-eto ogologo ma uniformly. Mgbe ị na-eji ìhè anyanwụ, ihe ndị ahụ na-epulite ga-adabere n'akụkụ ọkụ ahụ ma too eto, na-eme ka ogige micro gị nwee ntakịrị anya.
Mkpụrụ Mọstad pere mpe, gbaa gburugburu, na ọchịchịrị. Dị ka mkpụrụ osisi chia, ha na-enweta gooey mgbe etinyere ha na mmiri. O siri ezigbo ike ịkụ otu goop, yabụ maa gbanye ịmị mkpụrụ ndị a.
Ugbu a na ị nwere ihe oriri gị na mkpụrụ osisi a na-amịghị edozi, ka anyị kụọ! Jidere na-eto eto tree na drainage oghere ma jupụta ya fọrọ nke nta ka nkuchi na ala. Ire ụtọ si n'elu na alụlụ ya nke ọma na ịgba kalama. Iji ọbụ aka gị ma ọ bụ ihe dị larịị, jiri nwayọ zọọ ala.
Ọzọ, ghachaa mkpụrụ osisi mọstad n'akụkụ ala dum. Oghere ha nso ga-eto a ute nke elu ma dị nnọọ iche iji na-enye ohere maka aeration na trays. Ebe ọ bụ na ala adịlarị mmiri mmiri, mkpụrụ osisi ahụ kwesịrị ịnọ ma malite ịmalite ozugbo.
Jidere tray gị nke abụọ (na-enweghị oghere) ma dozie ya kpọmkwem na mkpụrụ. Ọ kwesịrị igbochi niile ìhè na pịa ala na ala. Tinye obere ibu di n’elu ka ị gbakwunye mkpụrụ n’ime ala. Ime nke a ga - enyere mgbọrọgwụ aka ka ọ gbadata n’ite ite. Imirikiti micro elu nwere ike ijide 5 pound, mana osisi mọstad nwere ike were 2 pound n'elu.
esi tufuo whiteflies n'ogige
Komatsuna mọstad microgreens
Ozugbo a kụrụ ya, mkpụrụ osisi mọstad ga-ewe ụbọchị 2-3 ka ọ topụta. N'oge ahụ, ị ​​ga-edebe ihe mkpuchi ahụ iji mee ka mkpụrụ ahụ nọrọ n'ọchịchịrị. I kwesịkwara ịlele ala mmiri kwa ụbọchị, misting dị ka mkpa.
Mgbe emechara, ahịhịa micro greens ga-ekpuchi ihe mkpuchi ahụ ka ha na-eto. A ga-ahụkwa ndị cotyledons. Nke a bụ akara gị iji wepu mkpuchi mkpuchi ahụ ma gbakwunye ọkụ na-eto eto banyere 12 sentimita asatọ n'elu trays ahụ. Akwụkwọ nke mọstad gris nwere ike ịbụ odo site na enweghị ìhè anyanwụ, mana ha ga-agbanye ngwa ngwa agba ha zuru oke.
Dika umu ahihia gi n’eto, jisie ike na ala n’acha mmiri mmiri. Mgbe ọ malitere ihicha, jighachi ihe mkpuchi ihe dị ka tray na-agba mmiri. Naanị jupụta ya na anụ ọhịa ma ọ bụ abụọ mmiri ma tinye tray na-eto eto n'ime. Ka ala were juju ya maka ihe dika nkeji iri ma wepu ihe ntanye di ala. Nke a na ala-atọ usoro bụ ụzọ kasị mma na-gị micro elu osisi hydrated enweghị na-agbakwunye ngafe mmiri na ala elu, nke nwere ike ikpo oku na-eto eto.
Mọstad na-adịkarị njikere maka owuwe ihe ubi n'etiti ụbọchị 5 na 14 site na ịkọ ihe. Nke a na - eme ka ha dị mma maka iwe ihe dịka achọrọ, n’adịghị ka microgreens ndị ọzọ nwere windo owuwe ihe ubi dị mkpirikpi.
Mgbe a ga-eri ya, a ga-emeghe akwụkwọ cotyledon kpamkpam na microgreen ga-enwe sentimita 1-3 nke uto. Otú ọ dị, a ga-egbute ha tupu akwụkwọ mbụ mbụ ahụ apụta, ebe ọ bụ na uto na udiri microgreen ga-agbanwe nke ukwuu.
Ebe ọ bụ na anyị na-ewepụ akwụkwọ niile, mọstad microgreens bụ osisi a na-eme eme. Nwere ike wepụta mkpụrụ ahụ mebiri emebi wee jigharịa ala, mana buru n'uche na ọ ga-efunahụ nri na-enweta nje na oge. Ikekwe nhọrọ kachasị mma bụ ịkọjupụta ala n'ime ụfọdụ ihe ọkụkụ na-eto eto maka ọrụ ọzọ (dịka basil micro elu .)
Tupu iri nri micro greens gị, gbanye ha nke ọma (ụfọdụ ndị na-akụ mkpụrụ osisi na-awụpụ nzọụkwụ a). Ekem, tinye ha na nri obula nke choro ogwu. Mkpụrụ osisi mọstad ọhụrụ dị mma dị ka ahịhịa na salad, sandwiches, hotdogs na ọtụtụ nri ndị India.
Ejiri micro greens a na-ejighị ya mee ihe n'ime akpa rọba ma debe ya na ngwa nju oyi (gbakwunye na akwa nhicha akwụkwọ iji banye mmiri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa). Ha kwesiri ịnọ nke ọma ruo ihe dị ka ụbọchị iri. Dika otutu nri ohuru, ekwesiri iri ha ozugbo enwere ike maka ezigbo uto na uru ahu ike.
esi wuo ite ite di nfe
Osaka Purple mọstad microgreens
Ajụjụ: Mkpụrụ osisi mọstad ọ dị mma maka gị?
A: Kpamkpam! Mkpụrụ osisi ndị a dị nso na kale na uru nri ha na-egosi! Ha nwere ọtụtụ vitamin na mineral yana uru maka uto ntutu. Ọzọkwa, nnyocha egosiwo na mọstad microgreen na-erite uru dị ukwuu maka ndị na-arịa ọrịa shuga.
Q: Gini ka microgreens guru nke uto?
A: Ọfọn, dị ka mọstad! Nwere ike itolite microgreens n'ọnọdụ ịkwado ngwa nju oyi gị site na ịdebere nri. Dabere n'ụdị dị iche iche, ahịhịa ndụ ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ịtọ ụtọ dị ka radish ịnyịnya.
Ibido Ubi Okpomoku Ulo, Ulo na Uzo Ogba
Malabar Spinach: Ogige Ubi na-ekpo ọkụ
Etu ị ga - esi too Arugula Microgreens ngwa ngwa ma dịkwa nfe
Otu esi etolite Boston Ferns: Nlekọta maka Nephrolepis Exaltata
Owuwe Ihe Ubi Nduku: Otu esi egwu ma chekwaa ha
Ugbo Ala Olee Otú
kacha mma mmetụta sprinkler maka ala nsogbu
nne di ire ire osisi
otú na-eto eto dwarf banana osisi